Ubuntu ရှိ WPA / WPA2 နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း Linux မှ
Ubuntu ရှိ WPA / WPA2 ကိုမည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း
ရိုးရှင်းတဲ့ google search ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကအတည်ပြုသည်။ Ubuntu ရှိ WPA / WPA2 နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်တကယ့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဖြေ? ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏အိမ်တွင် Wi-Fi ကို encryption ဖြင့်ပြုပြင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိသေးပါ WEPအစား WPA သို့မဟုတ် WPA2 ၏။ ပြနာက geeks (သို့) "hackers" တော်တော်များများကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိပေမယ့် WEP ကွန်ယက်တွေကအရမ်းအားနည်းနေတယ်ဆိုတာပြသခဲ့သည်။ ဟေး! တောင်မှရှိတယ် Youtube ပေါ်ရှိဗီဒီယိုများ သူတို့ကိုဘယ်လို 'hack' ရမည်ကိုရှင်းပြသည်။ ထိုဖြေရှင်းချက်သည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်သော်လည်းငါ့အတွက်အကျိုးပြုသည်။ တစ်နေ့ကျတော့ငါရုံးကိုသွားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီမှာသူတို့မှာ wifi ပါပေမယ့် WPA2 ရှိခဲ့တယ်။ Ubuntu ကဒီ encryption နဲ့ကွန်ယက်ကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်လို့မရသေးဘူးလို့ထင်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒေါသကြီးမိသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ငါရှင်းပြရမယ် ကျွန်ုပ်၏ Laptop ၏ wifi (အခြေခံ Atheros) အတွက်အခမဲ့ယာဉ်မောင်းများကိုမသုံးပါ (Compaq Presario CQ60-211DX) ကံမကောင်းစွာပဲအခမဲ့ဒရိုင်ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်နားမလည်သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်၎င်းကဖွင့်ထားသောမီဒီယာဖိုင်များကိုဖျက်လိုက်ပြီးဗီဒီယိုများသည် ပို၍ ဆိုးသည်။ Flash ဗီဒီယိုများကိုဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူတို့ဟာတကယ့်ကိုကြည့်နေကြတယ်။ ကျွန်ုပ် wifi driver ပြောင်းပြီးသည်နှင့်ဖြေရှင်းလိုက်သည် (WTF !!) ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, ငါငါလိုက်နာသောခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည်။ ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့ပြproblemနာနည်းနည်းလေးကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကပထမသုံးခုကိုငါလုပ်ပြီးသားပါ။ ကျွန်တော် Wi-Fi မှာ WEP သုံးနေရင်တောင်။
၁) install လုပ်ပါ ndiswrapper- ဘုံ y ndisgtk
၂။ System> Administration> Windows Wireless Drivers သို့သွားပါ။ ကျွန်တော့် Windows2XP driver driver ကို install လုပ်ပါ၊
၃) /etc/modprobe.d/ တွင်
၃။ က) blacklist.conf ဖိုင်တွင် black list ath3k & blacklist ath5k (သီးခြားလိုင်းများဖြင့်) ထည့်ပါ။
၃. ခ) နာမည်ပျက်စာရင်း - ath_pci ဖိုင်တွင် ath_pci ထည့်ပါ
၁ နဲ့ ၂ မှာ Ubuntu သုံးတဲ့ Windows driver ကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။ Ubuntu boot လုပ်တဲ့အချိန်မှာ 1 ကနေနောက်တစ်နည်းထပ်လုပ်ပြီးအခမဲ့ wifi driver ကိုပိတ်လိုက်တယ်။
WPA / WPA2 သို့ဆက်သွယ်မှု
၁) wpa_supplicant ကိုသွင်းပါ
sudo apt-get wpasupplicant ကို install လုပ်ပါ။
၂။ နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်အရာကandiswrapper အတွက် bug ကို။ ကြည့်ရသည်မှာ wpa_supplicant သည်လိုအပ်သော ဦး စားပေးမှုနှင့်အတူမ run ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်သွယ်လိုသောအခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် terminal တစ်ခုဖွင့်ပြီးရေးသားရမည်
sudo renice +19 $ (pidof wpa_supplicant)
ထိုနောက်ချက်ချင်းပင် WPA / WPA2 စာဝှက်ဖြင့်ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားပါ။
၃) သင်အလုပ်မလုပ်မချင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာ (ကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ အဆင့် ၂ ကိုထပ်ခါတလဲလဲ) ကြိုးစားကြည့်ရပေမည်။ ၆-၇ ကြိမ်အကြာတွင်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်ဆက်သွယ်လိုသောကွန်ယက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီရန် wpa_supplicant configuration ဖိုင်ကိုပြုပြင်ပါ။
ငါသိတယ်၊ ဒါကအကောင်းဆုံးအဖြေမဟုတ်ပေမယ့်အလုပ်လုပ်တယ်။ ငါ wpa_supplicant နှင့်အတူအခက်အခဲကနေပေါ်ပေါက်ထင်ပါတယ် ndiswrapper အတွက် bug ကို။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အရာရာတိုင်းဟာပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ငါထင်မြင်မိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် WPA / WPA2 ကွန်ယက်များသည်အသုံးပြုသူအတွက်ပိုမိုသန့်ရှင်းမှုရှိရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Ubuntu ရှိ WPA / WPA2 ကိုမည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း
ငါကြိုးစားမယ်၊ Ubuntu နဲ့ကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်မယ်၊ ဒါကအပြင်းအထန်တိုက်တွန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနောက်ပြန်လမ်းကြောင်းနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ကြည့်ရအောင်၊ အဲဒီ bug အတွက် patch တစ်ခုရှိသင့်တယ်။
ဗွီဒီယိုများကိုအလွယ်တကူကူးပြောင်းနိုင်ရန် Miro Video Converter